AirPods သည် iPod ရောင်းချမှုကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ ယခုကွာတားမှာ ဒေါ်လာ ၄ ဘီလျံအထိရောင်းရနိုင် | Myanmar Mobile App
Home Trending Gadget AirPods သည် iPod ရောင်းချမှုကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ ယခုကွာတားမှာ ဒေါ်လာ ၄ ဘီလျံအထိရောင်းရနိုင်
AirPods သည် iPod ရောင်းချမှုကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ ယခုကွာတားမှာ ဒေါ်လာ ၄ ဘီလျံအထိရောင်းရနိုင်
AirPods ဟာ အားလပ်ရက်ရာသီအတွက် အားခဲထားပြီးတော့ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ Apple မြင်ခဲ့ရတဲ့ iPod ရဲ့အမြင့်ဆုံးရောင်းအားဖြစ်တဲ့ ဒေါ်လာ၄ဘီလျံအမြတ်ငွေကို မကြာမီကျော်ဖြတ်လိမ့်မယ်လို့ သုတေသနအသစ်တစ်ခုက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
Asymco ဟာ Apple ရဲ့ Wearable, Home နှင့်အခြားအမျိုးအစားများမှ သုံးလတစ်ကြိမ်ရရှိမယ့်ဝင်ငွေကို ရှာဖွေလေ့လာတဲ့ သုတေသနစာတမ်းကို ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Apple Watchရဲ့ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၄ ဘီလျံကျော်လွန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ပထမဆုံးကွာတားမှာတော့ AirPods အလှည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Asymco ရဲ့ပြောကြားချက်အရ Apple က အရေအတွက်တွေကို မဖော်ပြခဲ့တာမို့ Wearable နဲ့ Home တို့ရဲ့ဝင်ငွေဟာ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီရဲ့ဝင်ငွေကိုပြောပြဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Watch ရဲ့ဝင်ငွေကိုခန့်မှန်းပြီး စုစုပေါင်းထဲကနေ နုတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် AirPods အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကို ရနိုင်ပါတယ်။
AirPods ဟာ သူတို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ စ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာကတော့ Watch ကို ှစောင့်ကြည့်ပြီးနုတ်ယူပြီးနောက် AirPods ဖြစ်တဲ့ “Non-Watch Wearables & Home” ရဲ့အပိုင်းကိုထပ်မံခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ AirPods ဟာ လာမယ့်ကွာတားအတွင်းမှာ ဒေါ်လာ၄ဘီလျံအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ iPod ရဲ့ဝင်ငွေကို မီနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ Apple ဟာ တစ်နှစ်ကို Wearables အတွက် ၅၀% တိုးတက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
Wearable အတွက် ၅၁%၊ Watch အတွက် ၂၄%တိုးတက်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။ Watch ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၅.၂ဘီလျံ၊ non-Watch ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ၅.၇ဘီလျံဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကနေ တွက်ချက်လိုက်တာပါ။ ယူဆကြည့်ရအောင်။ non-Watch-non-AirPods (i.e. Apple TV, HomePod, Beats, iPod, အခြား) ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁.၇ဘီလျံ ဖြစ်ရင်တောင် AirPods ဟာ သေချာပေါက် iPod အမြင့်ဆုံးရောင်းအားကို ကျော်နိုင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလည်း Apple က AirPods Pro ထုတ်လုပ်မှုကို နှစ်ဆတိုးထားကြောင်း Bloomberg က ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ AirPods ဟာ အားလပ်ရက်ရာသီကို အရင်ကထက် ပိုအားထားနေရကြောင်းကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
AirPods ဟာ အားလပ္ရက္ရာသီအတြက္ အားခဲထားျပီးေတာ့ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ Apple ျမင္ခဲ့ရတဲ့ iPod ရဲ႕အျမင့္ဆံုးေရာင္းအားျဖစ္တဲ့ ေဒၚလာ၄ဘီလ်ံအျမတ္ေငြကို မၾကာမီေက်ာ္ျဖတ္လိမ့္မယ္လုိ႕ သုေတသနအသစ္တစ္ခုက ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။
Asymco ဟာ Apple ရဲ႕ Wearable, Home ႏွင့္အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ားမွ သုံးလတစ္ႀကိမ္ရရွိမယ့္၀င္ေငြကို ရွာေဖြေလ့လာတဲ့ သုေတသနစာတမ္းကို ဒီေန႕ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက Apple Watchရဲ႕၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ပထမဆံုးကြာတားမွာေတာ့ AirPods အလွည့္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
Asymco ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရ Apple က အေရအတြက္ေတြကို မေဖာ္ျပခဲ့တာမို႕ Wearable နဲ႕ Home တုိ႕ရဲ႕၀င္ေငြဟာ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာ၊ ထုတ္ကုန္တစ္ခုစီရဲ႕၀င္ေငြကိုေျပာျပဖုိ႕ဆိုတာ ခက္ခဲေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Watch ရဲ႕၀င္ေငြကိုခန္႕မွန္းျပီး စုစုေပါင္းထဲကေန ႏုတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ AirPods အတြက္ခန္႕မွန္းခ်က္ကို ရႏုိင္ပါတယ္။
AirPods ဟာ သူတို႕အတြက္ ၾကီးမားတဲ့ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ စ္ခုတည္းေသာေ႐ြးခ်ယ္စရာကေတာ့ Watch ကို ွေစာင့္ၾကည့္ၿပီးႏုတ္ယူၿပီးေနာက္ AirPods ျဖစ္တဲ့ “Non-Watch Wearables & Home” ရဲ႕အပိုင္းကိုထပ္မံခန႔္မွန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီကိန္းဂဏန္းေတြကိုအေျခခံျပီးေတာ့ AirPods ဟာ လာမယ့္ကြာတားအတြင္းမွာ ေဒၚလာ၄ဘီလ်ံအျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ iPod ရဲ႕၀င္ေငြကို မီႏုိင္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းခ်က္ထုတ္ခဲ့တာပါ။ Apple ဟာ တစ္ႏွစ္ကို Wearables အတြက္ ၅၀% တိုးတက္လာမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။
Wearable အတြက္ ၅၁%၊ Watch အတြက္ ၂၄%တိုးတက္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ Watch ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၅.၂ဘီလ်ံ၊ non-Watch ၀င္ေငြ ေဒၚလာ၅.၇ဘီလ်ံဆိုတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြကေန တြက္ခ်က္လိုက္တာပါ။ ယူဆၾကည့္ရေအာင္။ non-Watch-non-AirPods (i.e. Apple TV, HomePod, Beats, iPod, အျခား) ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁.၇ဘီလ်ံ ျဖစ္ရင္ေတာင္ AirPods ဟာ ေသခ်ာေပါက္ iPod အျမင့္ဆံုးေရာင္းအားကို ေက်ာ္နုိင္ပါတယ္။
ျပီးခဲ့တဲ့လတုန္းကလည္း Apple က AirPods Pro ထုတ္လုပ္မႈကို နွစ္ဆတိုးထားေၾကာင္း Bloomberg က ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ AirPods ဟာ အားလပ္ရက္ရာသီကို အရင္ကထက္ ပိုအားထားေနရေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။
Previous articleiTunes Remote iOS app ရဲ့ Dark Mode
Next articleApple Pro Display XDR ကို iMac Pro နဲ့တွဲသုံးလို့ရပါတယ်